कुन दिशामा टाउको राखेर सुत्नु सबैभन्दा शुभ मानिन्छ ? - Purbeli News
कुन दिशामा टाउको राखेर सुत्नु सबैभन्दा शुभ मानिन्छ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष १२, २०७८ समय: २०:३५:२९
तपाईको आर्थिक अवस्था सुत्ने दिशामा निर्भर गर्दछ । तपाई कसरी सुत्नुहुन्छ तपाईको जीवनसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा निर्भर गर्दछ। यदि सुत्ने समयमा तपाईको दिशा ठिक छैन भने तपाईको जीवनमा समस्या आउन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, सही दिशामा टाउको राखेर सुत्दा राम्रो निन्द्रा मात्र आउँदैन, आर्थिक रूपमा पनि समृद्ध बनाउँछ। आज हामी तपाईलाई सुत्ने बेला कुन दिशा सही गर्नुपर्छ र यसका फाइदाहरु के के छन् भनी बताइरहेका छौँ ।
दक्षिण दिशामा टाउको राखेर सुत्दा फाइदा हुन्छ
वास्तुका अनुसार यस दिशामा टाउको राखेर सुत्नु उत्तम मानिन्छ । यस दिशामा टाउको राखेर सुत्दा स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ र सबै प्रकारका मानसिक समस्याबाट टाढा रहन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । ध्यान दिनुहोस् दक्षिण दिशामा खुट्टा राखेर सुत्न चै भुलेरपनि हुन्न । यसलाई धार्मिक दृष्टिले अशुभ र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि हानिकारक मानिन्छ । दक्षिण तर्फ घुम्दा चुम्बकीय धारा खुट्टामा प्रवेश गरी टाउकोबाट निस्कन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसले तपाईको दिमागमा तनाव बढाउँछ र निद्रामा पनि बाधा पुर्‍याउँछ।
सुतिरहेको टाउको पूर्व
दक्षिण पछि दोस्रो सही दिशा पूर्व मानिन्छ। यदि दक्षिण दिशामा टाउको राखेर सुत्न सम्भव छैन भने पूर्वमा टाउको राखेर सुत्न पनि सकिन्छ । यसो गर्नाले देवताको कृपा प्राप्त हुने जनविश्वास छ । यसैगरी सूर्यको यस दिशाबाट प्रस्थान हुनाले यसलाई जीवनदायी दिशा मानिन्छ। भुलेर पनि यस दिशामा खुट्टा राखेर सुत्नु हुँदैन । धार्मिक रुपमा यसलाई अशुभ मानिन्छ ।
पूर्व दिशामा टाउको राखेर सुत्नु शुभ मानिन्छ
यदि तपाईं आफ्नो घरमा एक मात्र कमाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने। अथवा जागिर र ब्यापार गर्नुहुन्छ भने पूर्व दिशामा टाउको राखेर सुत्नु उत्तम मानिन्छ । यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईको टाउको पूर्व दिशामा राखेर सुत्नु राम्रो मानिन्छ । पूर्व दिशामा टाउको राखेर सुत्दा एकाग्रता बढ्छ भन्ने मान्यता छ ।
सुत्दा अर्थ लाग्ने विषय
शास्त्र अनुसार ऋषि–मुनिहरुले साँझ अर्थात् साँझमा पनि सुत्नु हुँदैन भनिएको छ । सुत्नुभन्दा कम्तिमा दुई घण्टा अघि खाना खानुपर्छ । यसो गर्नेहरु पेटको समस्याबाट टाढा रहन्छन् ।
राति अबेरसम्म उठ्नु पनि निद्रामा बाधा पुर्‍याउने मानिन्छ। सुत्नुअघि मन शान्त गर र भगवानको ध्यान गरेपछि सुत्ने ।